Umlutha wezocansi uqala nini? - I-Foundation Foundation
Ikhaya Umlutha wezocansi uqala nini?
UGary Wilson uphakamisa umbuzo osobala mayelana nokulutha kwezocansi: "Ngakanani ngokweqile?" use yourbrainonporn.com iwebhusayithi. Uyaphawula ukuthi lo mbuzo ucabanga ukuthi imiphumela ye-porn iyinambambili. Lokho wukuthi, awunankinga, noma ungumlutha wezocansi. Kodwa-ke, izinguquko zobuchopho ezenziwa nge-porn zenzeka kububanzi. Azikwazi ukuhlukaniswa kuphela njengamnyama nomhlophe. Akuzona nje noma / noma. Ukubuza lapho umuntu ewela khona umugqa kushaya indiva umgomo wokusebenza komzimba. Ubuchopho buhlala bufunda, buyashintsha futhi buzivumelanisa nezimo ngokuphendula imvelo.
Ucwaningo luveza ukuthi ngisho nokunciphisa okungavamile okungashintsha kalula ubuchopho nokushintsha ukuziphatha.
Isibonelo, kuthathe izinsuku ezingu-5 kuphela yenza ukuzwela okuphawulekayo kumidlalo yevidiyo kubantu abadala abasebasha abanempilo. Abadlali bebengewona umlutha, kepha umsebenzi ophakeme wobuchopho uhambelana nezifiso zabo zokudlala. Kwenye ukuhlolwa, cishe wonke amagundane anikezwe ukufinyelela okungavinjelwe "kokudla kwendawo yokudlela" okubanjwe ukukhuluphala. Kuthathe izinsuku ezimbalwa kuphela ukugaya ukudla okungenamsoco ukuze amagundane ama-dopamine receptors enqabile. Lokhu kunciphise ukwaneliseka kwabo ekudleni. Ukwaneliseka okuncane kwaxosha amagundane ukuba alume kakhulu.
Mayelana ne-inthanethi ye-porn, lokhu Isifundo saseJalimane kusukela e-Max Planck Institute ehloniphekile yabheka amadoda abesebenzisa abalingani abancane be-porn. Ithole izinguquko ezinkulu zobuchopho eziphathelene nokulutha. Lapho beqhathaniswa ne-porn, ukuxhumana okuncane okusebenzayo kwakukhona phakathi kwengxenye yokucabanga neyomzwelo yengqondo. Ngesikhathi esifanayo kwakukhona nokucutshungulwa kobuchopho obuncane ekubhekaneni ne-pornography, okunye okwedlula izithombe ezingcolile. Lesi isibonakaliso sobuciko sokususwa kwemisebenzi lapho umuntu esetshenziselwa izinga elithile lokugqugquzela. Ngokuhamba kwesikhathi badinga izinto ezishaqisayo noma ezimbi ukuze zivuswe.
An Isifundo sase-Italy bathole ukuthi i-16% yabadala asezikoleni eziphakeme abadla izithombe ezingcolile zobulili ezingaphezu kwesonto ngesonto babe nesifiso esingavamile socansi. Qhathanisa lokho ku-0% wabasebenzisi abangewona abathintekayo ababika isifiso sobulili esifanele.
Izinkinga ngaphandle kokulutha umlutha
Ukuqothulwa ukuthi leyo mithi ayidingekile noma inguquko ebuchopho obukhulu noma imiphumela emibi.
Ngokumane nje, isimo sezocansi, ukugqugquzela, ukususa izinkinga kanye nezinye izinguquko zobuchopho eziphathelene nokulutha, zivela emvelweni. Futhi qaphela ukuthi ubuchopho bethu buhlala bufunda futhi bujwayela imvelo. I-porn ye-intanethi ivuselela okungavamile. Iqondisa izifunda zakho zangasese ezingavamile, zakha ubuchopho futhi zishintsha umbono.
Uma ufuna ukuhlola ucwaningo phakathi kwezixhumanisi phakathi kokusetshenziswa kocansi nokukhathazeka komphakathi, chofoza lapha. Lokhu kukuyisa kusayithi elingaphandle futhi kuvuleke kuwindi elisha.